डेंगूबाट बच्ने घरेलु उपाय के हो ? — Flash News Bishwa Ghatana
डेंगूबाट बच्ने घरेलु उपाय के हो ?
डेंगू नेपालमा अहिले महामारीको रुपमा फईलिदै छ । नेपालमा डेंगूले धेरैको ज्यान लिसकेको छ । डेंगूले गर्दा अस्पतालमा जाँच गर्न आउनेको चाप बढिरहेको छ । डेंगू को शंका गर्दै जाँच गर्न आउनेहरुको संख्या बढेपछि अस्पतालमा थप काउन्टर र चिकित्सकहरु थपेर विरामीहरुलाई सेवा दिने काम भइरहेको छ ।
डेंगूले शरीरलाई आन्तरिक रूपमा क्षतिग्रस्त र कमजोर बनाउँछ । डेंगू एडिस एजिप्टाई पोथी जातिको लामखुट्टेले टोक्दा यो रोग सार्दछ । यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्दछ । डेंगूको लक्षण भनेको एक्कासि उच्च ज्वरो आउनु हो । यो ज्वरो ५ देखि ७ दिनसम्म रहन सक्छ । ज्वरोका साथै निम्न लक्षणहरू पनि देखा पर्दछ । डेंगूको लक्षण असाध्यै टाउको दुख्ने गर्छ । शरीरमा विमिरा आउने,वाकवाकी लाग्ने,नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने र रक्तश्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने, बेहोश हुने आदि लक्षणहरू पनि देखा पर्न सक्छ ।
चिकिसक अनुसार डेंग पोजिटिभ हुने वित्तिकै आत्तिनु पर्दैन । यसको उपचार हुन्छ, तर डेंगु देखिएपछि उपचारमा ढिलाई गर्ने नहुने उनको भनाइ छ । यो रोगको मुख्य लक्षण उच्च ज्वरो आउनु, ज्वरो पाँचदेखि सात दिनसम्म रहनु । टाउको असाध्यै दुख्नु । आँखाको गेडी र पछिल्लो भाग दख्नु, ढाड, जोर्नी र मांसपेशी दुख्नु, शरीरमा बिमिरा देखापर्नु र धेरै ज्वरो आई दुई वा दुईभन्दा बढी लक्षण देखापरेको अवस्थामा डेंगु ज्वरो आएको शंका गर्न सकिनेछ ।
तपाइहरुलाई डेंगुबाट बच्ने घरेलु उपायबारे केहि जानकारी दिनछौ
यस लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा शरीर ढाकिने लुगा लगाउनुपर्छ ।
तुलसी र महको प्रयोग: तुलसी र महकाे प्रयाेग गर्नाले पनि डेंगूबाट आफुलाइ बचाउन सकिन्छ । यसका लागि तुलसीलाइ पानीमा उमालेर त्यसमा मह मिलाएर पिउन सकिन्छ । यसका अलवा तुलसीकाे प्रयाेग चियामा पनि गर्न सकिन्छ । यसमा भएकाे एण्टिब्याक्टेरियल गुणले राेग लाग्न बाट बचाउन सहयाेग गर्दछ ।
डेंगूबाट बच्न मेवाको पात प्रयोग: मेवाकाे पातकाे रस निकालेर दिनमा २-३ चम्चा खाएमा डेंगूबाट बच्न सकिन्छ । यसमा प्रोटीनले भरपूर पपेन नामकाे एन्जाइम पाइन्छ, जसले गर्दा पाचन शक्तिलाइ सन्तुलित गर्छ यसका गर्दा राताे रक्त कणकाे पनि वृद्धि गर्दछ ।
मेथीकाे हरियाे पातकाे सेवन: मेथीकाे हरियाे पातकाे सेवन गर्नाले डेंगूबाट आफुलाइ बचाउन सकिन्छ । डेंगूको प्रयाेगले शरीरमा रहेका सम्पूर्ण हानिकारक र विषाक्त पदार्थलाइ बाहिर निकालने काम गर्छ ।साग या यसलाइ पानीमा उमालेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको साटो मेथीकाे दाना पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
बाख्राकाे दूध सेवन: बाख्राकाे दूध सेवन गर्दा पनि आफुलाइ बचाउन सकिन्छ।बाख्राकाे काँचाे दूध दिनमा दुइ या तीन पटक पिउनाले डेंगूबाट आफुलाइ बचाउन सकिन्छ । यति मात्रै नभई यसले रगतकाे कमिलाइ पूर्ण गर्दछ, प्रतिरक्षा तन्त्रलाइ मजबूत गर्दछ भने जाेर्निकाे दुखाइलाइ पनि निकै लाभदायिक हुन्छ ।
जमराकाे जूस सेवन: गर्नाले आफुलाइ डेंगूबाट बचाउन सकिन्छ। हरेक दिन दुइपटक एक चिया गिलास जमाराकाे जूस पिउनाले डेंगूका साथै कैँयाै राेगहरूबाट बच्न सकिन्छ । यसको अलावा मच्छरबाट जति सकिन्छ बच्नु नै डेंगूबाट बच्ने प्रमुख उपाय हाे । मच्छरबाट बच्नका लागि हर समय सावधानी हुनुपर्छ र पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुर्नुपर्दछ, घर बाहिर निस्कँदा लामो बाहुला भएका कपडा लगाउने, सुत्दा झुलको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। सकेसम्म झ्याल, ढोकामा जाली प्रयोग गर्ने र अन्त्यमा डेंगुको शंका लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्छ।
घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्ने, पानी जम्ने खाल्टा खुल्टी पुर्ने गर्नु पर्छ । सम्भव भएसम्म दिउँसो सुत्दा पनि झुल प्रयोग गर्नु पर्छ, साथै साना केटाकेटिलार्य जुनसुकै समयमा पनि झुल भित्र सुताउनु पर्दछ ।कुलरमा रहेको पानीमा प्रत्येक हप्ता एक दुई चम्चा मट्टितेल हालिदिने साथै जम्मा भएको पानी सफा गर्नाले डेंगूबाट बच्न सकिन्छ।
विप्लवका छोरा प्रकाश चन्द रातारात पक्राउ
यस वर्ष दशैँका लागि बाँकेबाट तीन हजार खसी काठमाडौँ पठाइँदै